Timberlandအမျိုးသားဝတ် အကွက်ဒီဇိုင်း လက်တိုရှပ်အင်္ကျီ - အပြာရောင်၊ အဖြူရောင် | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
ပစ္စည်းအမျိုးအစား အားလုံး ဖက်ရှင် အမျိုးသမီးများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ညအိပ်ဝတ်စုံများ အသုံးအဆောင်များ အမျိုးသားများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ခြေအိတ်များ အသုံးအဆောင်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသား) ဂျင်းဘောင်းဘီများ ရှပ်များ နာရီများ အိတ်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသမီး) ဂါဝန်များ အိတ်များ နာရီများ လက်ဝတ်ရတနာများ TOP BRANDS TIMBERLAND NICHII OUTDOOR PRODUCTS COZY CORNER SPRINGFIELD YANGOODS အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး ရေမွှေးများ အမျိုးသမီးသုံး အမျိုးသားသုံး မိတ်ကပ် မိတ်ကပ်ပစ္စည်းများ အလှပြင် ပစ္စည်းများ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းများ မျက်နှာအတွက် ကိုယ်ခန္ဒာအတွက် အလှအပရေးရာ စက်များ လက်သည်းအလှအပ ခြေ/လက်အလှအပ လက်သည်းနီ/ခြေသည်းနီများ ဆံကေသာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ခေါင်းလျှော်ရည် နှင့် ပျော့ဆေးများ ဆံကေသာသုံး ပစ္စည်းများ အမျိုးသားများအတွက် အသားအရေအတွက် မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်များ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆေးဝါးမျိုးစုံ ကျန်းမာရေးအတွက် ကိရိယာများ ဖြည့်စွက်ဆေးများ Top Brands MAYBELLINE YVES ROCHER MA'SURI POND'S L'oreal ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ စမတ်ဖုန်းများ ခလုတ်ဖုန်းများ ကြိုးဖုန်းများ ဆက်စပ်ပစ္စည်များ စမတ်နာရီများ နားကြပ်များ စပီကာများ မမ်မိုရီကတ်များ ဖုန်းမျက်နှာပြင်အကာ ဖုန်းအားသွင်းကြိုးများ ဖုန်းအိတ်နှင့်ကာဗာများ ဘလူးတုသ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပါဝါဘန့်များ တက်ဘလက်များ iPadများ ၈လက်မနှင့်အထက် ၈လက်မအောက် TOP BRANDS SAMSUNG XIAOMI APPLE SONY HUAWEI LENOVO ကွန်ပြူတာများ လက်ပတော့ပ် များ နုတ်ဘုတ်များ Macbook များ ပရင်တာနှင့်စကန်နာများ ဘက်စုံသုံးပရင်တာများ လေဆာပရင်တာများ ရုံးသုံးပရင်တာများ ဟာ့ဒစ်စ်နှင့်မန်မိုရီကဒ်များ ဟာ့ဒစ်စ်များ မမ်မိုရီကဒ်များ မမ်မိုရီ စတစ်များ တွဲဖက်ပစ္စည်းများ လက်ပတော့ပစ္စည်းများ နားကြပ်နှင့် စပီကာများ ကီးဘုတ်များ ဒီဗီဒီစက်များ နက်ဝေါ့ပစ္စည်းများ ပရောဂျက်တာများ အခြားပစ္စည်းများ မောက်စ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ ကာဗာနှင့်အိတ်များ ဘတ်ထရီ နှင့် အားသွင်းကြိုးများ ကေဘယ်လ် ကြိုးများ ဒက်စတော့်ပ်နှင့်မော်နီတာများ All-in-ones တာဝါများ မော်နီတာများ TOP BRANDS Acer HP Asus ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ အိမ်သုံးဂိမ်းစက်များ အိတ်ဆောင်ဂိမ်းစက်များ ဂိမ်းစက်တွဲဖက်ပစ္စည်းများ ဂိမ်းခွေများ Playstation ဂိမ်းခွေများ Xbox ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ Nintendo Wii ဂိမ်းခွေများ Nintendo DS ဂိမ်းခွေများ အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကင်မရာများ ကင်မရာများ ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာများ ပိုလာရွိုက်ကင်မရာများ ဗီဒီရိုကင်မရာများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မမ်မိုရီကဒ်များ ဆယ်လ်ဖီစတစ်များ ဖျော်ဖြေရေးစက်ပစ္စည်းများ တီဗီများ LED တီဗီများ စမတ်တီဗီများ Blu Ray နှင့် DVD စက်များ DVD Players Blu Ray Players iPod နှင့် MP3 များ နားကြပ်များ MP3 နှင့် အသံဖမ်းစက်များ စပီကာနှင့်အသံချဲ့စက်အသေးများ တီဗီ၊ဗီဒီယိုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 3D မျက်မှန်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်စနစ်များ စပီကာစနစ်များ စပီကာများ စပီကာများ ဒီဂျေ နှင့် ကာရာအိုကေ Hi-Fi စနစ် ကားဂျီပီအက်စ်နှင့်အသံစနစ်များ ကားတွင်းသုံးတီဗီများ TOP BRANDS Samsung Panasonic Philips Sony JVC အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အိမ်သုံးပစ္စည်းအကြီးများ ရေခဲသေတ္တာနှင့်ရေခဲစက်များ ပန်ကာများ လေအေးပေးစက် အ၀တ်လျှော်စက် အိမ်သုံးပစ္စည်းအသေးများ ဖုန်စုပ်စက်များ မီးပူ ရေနွးအိုးနှင့်ရေပူပေးစက်များ လေသန့်စင်ပေးစက် ရေပူ၊ရေအေးစက် အ၀တ်အထည်ထိန်းသိမ်းမှု ရေသန့်စက်များ လျှပ်စစ်မီးများ မီးဖိုချောင်သုံးစက်ပစ္စည်းများ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ ထမင်းပေါင်းအိုး မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖို ဟင်းချက်ပစ္စည်းများ ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိပ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်နှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများ အိမ်ပြင်ပသုံးစက်ကိရိယာများ အိမ်တွင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများ ပရိဘောဂများ အိမ်သုံး ရုံးသုံး TOP BRANDS Samsung New World Hisense ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ဂဏန်းပေါင်းစက်များ စက်ကိရိယာများ ကလေးများအတွက် ကလေးငယ်များ စောင့်ရှောက်မှုပစ္စည်းများ အသုံးအဆောင်များ အခြားကလေးသုံး ပစ္စည်းများ ကစားစရာများ Hand Fidget Spinners TOP BRANDS NUBY Mamy Poko စားသောက်ကုန်များ စားသောက်ကုန်နှင့်အချိုရည်များ စားသောက်ကုန်များ အချိုရည်များ ၀ိုင်နှင့်ယမကာများ အားကစားနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး အားကစား စကိတ်ဘုတ်များ ပြင်ပအားကစား ဘတ်စကတ်ဘော ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး အားကစားပစ္စည်းအကြီးများ အားကစားပစ္စည်းအသေးများ အားကစားအ၀တ်အထည်များ အားကစားအသုံးပြုပစ္စည်းများ အခြား အကြောင်းအရာကဏ္ဍများ ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်သုံးပစ္စည်းများ ပွဲများနှင့်လက်မှတ်များ စာအုပ် နှင့် စာရေးကိရိယာများ ဈေးဝယ်လှည်း အကူအညီ လိုအပ်လျှင် Login ပင်မစာမျက်နှာ ဖက်ရှင် အမျိုးသားများ အတွက် အမျိုးသားအ၀တ်အစား ရှပ်အင်္ကျီများ Casual ရှပ်များ လက်တို Timberland အမျိုးသားဝတ် အကွက်ဒီဇိုင်း လက်တိုရှပ်အင်္ကျီ - အပြာရောင်၊ အဖြူရောင် Timberland အမျိုးသားဝတ် အကွက်ဒီဇိုင်း လက်တိုရှပ်အင်္ကျီ - အပြာရောင်၊ အဖြူရောင်By Timberland (3) သုံးသပ်ချက် ရေးရန် > ဆိုဒ်/အရောင် S Timberland ဆိုင်သို့ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုရန် Ks 105,000 ယခု ၀ယ်ယူရန် မှတ်ထားရန် ရောင်းချသူ MK Lifestyle ပစ္စည်းပို့ရန် ကြာချိန်2-4ရက် ရုံးဖွင့်ရက်အတွင်း ပို့ပေးပါသည်။ ပစ္စည်းရောက် ငွေချေစနစ် ၇ရက်အတွင်း အခမဲ့ပြန်ပို့နိုင်မှု အသေးစိတ်ကြည့်ရန် : Return Policy ကုန်ပစ္စည်း စစ်မှန်မှု သုံးသပ်ချက်များဖော်ပြချက်အညွှန်းပြန်ပို့ခြင်း/ပြန်အမ်းငွေရယူခြင်း5မှတ် (1)4 မှတ် (0)3 မှတ် (2)2 မှတ် (0)1 မှတ် (0)
ပျမ်းမျှအမှတ်ပေးချက် 3,73 နှုန်းအား အခြေခံ၍ ဤကုန်ပစ္စည်းအား သင်ယခင်က သုံးစွဲဖူးပါသလား?5432 1 သုံးသပ်ချက် ရေးရန် Timberland အမှတ်တံဆိပ် အမျိုးသားဝတ် အကွက်ဒီဇိုင်း လက်တိုရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည် ဖြစ်ပါသည်။ ချည်သားစစ်စစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် ရာသီမရွေးဝတ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ ပေါ့ပါးလွတ်လပ်မှုရှိပြီး သက်တောင့်သက်သာဝတ်နိုင်သည့်အတွက် သင့်အ၀တ်ဗီရိုထဲတွင် ရှိထားသင့်သည့် အ၀တ်အစားမျိုးဖြစ်ပါသည်။ ယခုပစ္စည်းအား Shop.com.mm Online Shopping Mall တွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။About the BrandTimberland
အမှတ်တံဆိပ်သည် အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး လှပသေသပ်သည့်ဒီဇိုင်းတို့နှင့် အမျိုးသားစီးဖိနပ်
များကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူရောင်းချကာ ကမ္ဘာ့ဖက်ရှင်လောကတွင် ဦးဆောင်လျက်ရှိသည့် ဖက်ရှင်အမှတ်
တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားစီးဖိနပ်များနှင့်လူသိများသည့်အလျောက် အ၀တ်အစားပိုင်းတွင်လည်း
ကမ္ဘာ့ ခေတ်စားနေသည့်ဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်းနှင့်အညီ စတိုင်ကျလှပသည့်အမျိုးသားဝတ်၊ အမျိုးသမီးဝတ်၊
ကလေး ၀တ်တို့ကို ရှပ်အကျီ၊ တီရှပ်၊ ဂျက်ကက်၊ ကုတ်မှအစ ဘောင်းဘီအဆုံး တီထွင်ချုပ်လုပ်လျှက်ရှိသည်။
Timberland ဒီဇိုင်းများကို ပြင်ပတွင်သွားလာလှုပ်ရှားနေသူများအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားပြီး
၀တ်ဆင် သူတိုင်းကို မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိသူများအဖြစ် ထင်ဟပ်နေစေမှာဖြစ်သည်။Timberland အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အ၀တ်အစားများ၏ အရွယ်အစားဆိုဒ်များကို အောက်ဖော်ပြပါဇယားတွင် အသေးစိတ် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။အမျိုးသားစီးဖိနပ်များမိတ်ဆက်ပေးပြီး
နှစ်အနည်းငယ်အကြာ ၁၉၈၈ တွင် အမျိုးသားဝတ်၊ အမျိုးသမီးဝတ် အ၀တ်အစားများနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို
ဈေးကွက်နှင့် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆီလီကွန်နှင့် သားရေသားတို့ကို ပေါင်းစပ်တီထွင်သော
Timberland ၏မူပိုင်နည်းပညာနှင့် ရေစိုခံသားရေဂျက်ကက်များဖြင့် အ၀တ်အစားလောကကို ဆန်းသစ်စေခဲ့သည်။
Timberland သည် ၀တ်ဆင်သူများအတွက် သက်တောင့် သက်သာရှိရုံသာမကာ ဖက်ရှင်ကျလှပစေမှာဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် အကြမ်းခံသောကြောင့် ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့ မှုမရှိဘဲ ကြာရှည်ခံစွာဝတ်ဆင်နိုင်မှာဖြစ်သည်။ယနေ့အချိန်တွင်
Timberland သည် Timberland® ၊
Timberland PRO® ၊ Mountain
Athletics® နှင့် Timberland
Boot Company® အစရှိသည့်အမှတ်တံဆိပ်အခွဲတို့ဖြင့်
ကမ္ဘာ့အနှံ့တွင် ဆိုင်ခွဲပေါင်း ၂၃၀ ကျော် ဖွင့်လှစ်ပြီးစီးပြီးဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင် အာရှ၊
ကနေဒါ၊ ဥရောပ၊ လက်တင်အမေရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အမေရိကတို့ရှိ ကုန်တိုက်များနှင့်အားကစားပစ္စည်းရောင်းချသည့်ဆိုင်များတွင်လည်း
၀ယ်ယူရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်သည်။ သင်ဘယ်ကိုသွားသွား စတိုင်မိမိနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိစေဖို့
Timberland က တာဝန်ယူ ပေးမှာဖြစ်သည်။အဓိက အကြောင်းအရာများအကွက်ဒီဇိုင်းလက်တိုရှပ်အင်္ကျီပေါ့ပေါ့ပါးပါးဝတ်နိုင်သည့်ဒီဇိုင်းCountry of origin - Americaအိမ်အရောက်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်ခပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် အမျိုးသားဝတ် အကွက်ဒီဇိုင်း လက်တိုရှပ်အင်္ကျီ - အပြာရောင်၊ အဖြူရောင် SKUTI042FA1FPD9CNAFAMZ မော်ဒယ်လ်TBOA189F-B05 Weight (kg)0.2 ColourBlue, White ၇ရက်အတွင်း ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီး ပြန်အမ်းငွေရယူနိုင်ခြင်း
၁။ ကုန်ပစ္စည်းသည် နဂိုမူလ ထုတ်ပိုးထားသော ပုံစံရှိရပါမည်။ ဖက်ရှင်အဝတ်အထည်များကို	မိမိနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစမ်းသပ်ဝတ်ဆင်ကြည့်နိုင်သော်လည်း ဝယ်ယူစဉ်ကအတိုင်းအထုတ်အပိုးနှင့်ပုံစံမပျက်ရှိရပါမည်။ ဝယ်ယူစဉ်ကအတိုင်း အသစ်အခြေအနေမရှိသောကုန်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်ပေးပို့မှု လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။	၂။ ပြန်လည်ပေးပို့လိုသည့်အခါ နဂိုဝယ်ယူစဉ်ကပါရှိသော တံဆိပ်များ၊အာမခံကဒ်ပြားများ၊လက်ဆောင်များ၊အသုံးပြုရန်အညွှန်းစာအုပ်၊တွဲဖက်ပစ္စည်းများ အစရှိသည်တို့ အပြည့်အစုံပါဝင်ရပါမည်။
သင့်အိတ်ကပ်အတွင်းမှ Shop.com.mm !ဖုန်းတွင် အသုံးပြုရန် app ကိုအခမဲ့ရယူနိုင်ပါပြီအခမဲ့ရယူရန် Shop.com.mm အတွက် အဖွဲ့ဝင်အသစ်လား ? လက်တလောသတင်းများ၊ အထူးလျော့ဈေးများအကြောင်း အချိန်နှင့် တပြေးညီသိရှိရန် သတင်းလွှာကို ရယူလိုက်ပါ
Make Money with Us Shop.com.mm ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ဖြစ်လာဖို့ Shop Championship Program အကျိုးတူပူးပေါင်းလိုသူများအတွက်
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ	Visa နှင့်ဆိုင်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ	Shop International